ဝါးခယ်မ : ရဲလေးနဲ့ အေးမြအောင်တို့ရဲ့ ချစ်ခွန်းဖွဲ့စကားသံများ
( Photo- Nyo Ohn Myint's facebook)
Photo from Irrawaddy Blog
ကိုရဲလေးကို တကယ်မေတ္တာရှိလို့ပါ။ ချစ်လို့ပါ။ မြန်မာသီချင်းတွေ သိပ်မသိဘူး။ သိပ်လည်း နားထောင်လေ့တော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုရဲနဲ့ ခင်တာ တော့ ကြာလှပြီ။ တစ်ယောက် အကြောင်းလည်း တစ်ယောက်သိတာကြောင့်လက်တွဲဖော် အဖြစ် ရွေးချယ်ဖြစ်သွားတာပါ။ လူဆိုတာ ဘယ် အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် အကျင့်စာရိတ္တပဲ အရေးကြီး တယ်။ ကိုရဲလေးက အကျင့် စာရိတ္တကောင်းမွန်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက် ဆို တာအပြည့်အဝ ယုံကြည်လို့ လက်တွဲတာပါ။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ချစ်တာအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။အချစ်ရှိဖို့ လိုတာပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ ကလည်း လိုအပ်တယ်လေ။ ညှိ နှိုင်းရင်းနဲ့ အားလုံးအဆင် ပြေသွားမှာပါ။
ခိုင်ဝေလွင်By Popular Myanmar
ဆက်စပ်ဖတ်ရှု၇န် အဆိုတော် ရဲလေးရဲ. မင်္ဂလာ သတင်း နှင်. သူကိုယ်တိုင် အပြော
Posted by အဇ္ဇုန at 11:38 AM